Ngubani owadala iYouTube: yintoni kwaye yaba njani ukuvela kwayo okumangalisayo kwi-intanethi | Abadali be-Intanethi
Ukubukela iividiyo zethu esizithandayo, ukumamela umculo, ukubhalisela isitishi okanye ukwenza eyakho, ukulayisha iividiyo zaso nasiphi na isifundo okanye ukuncokola bukhoma nabanye abantu abavela kwihlabathi liphela ngelixa uzirekhoda, zezinye ze iimpawu ezivezwa zizixhobo ezifana neYouTube.
Okwangoku siyayazi indlela esetyenziswa kakhulu esi sicelo mihla le, kuba sibulela kubo amawaka kunye namawaka abantu baye bangena kwintsholongwane ngenxa yomxholo abawulayishayo. Into abambalwa kakhulu abakwaziyo kukuba ngubani owayenombono okrelekrele wokuyila isixhobo esikwaziyo ukwenza zonke ezi zinto.
Kule posi siza kuthetha nawe malunga nesi sicelo sinobuchule kunye nembali yaso enkulu kwi-intanethi.
1 Yintoni Youtube
2 imbali ye-youtube
2.1 Isidlo esaqala uYouTube
2.2 Ividiyo yokuqala yembali yayo
2.3 Elinye inyathelo elisingise eluzukweni
2.4 uphawu lokuqala
2.5 Impumelelo kunye noGoogle
2.6 ixesha leHD
3 Abona basebenzisi beYouTube babalaseleyo
3.2 Dlala isiJamani
3.4 Luisito Unxibelelwano
Ngaphambi kokuba singene nzulu kwimbali yayo, kufuneka sichaze ukuba yintoni esi sixhobo. Youtube sisicelo esisebenza njengesixhobo se-intanethi esikuvumela ukuba ulayishe kwaye ubukele iividiyo zawo nawuphi na umxholo kunye nohlobo. Yenziwe malunga nomnyaka we-2005 ngabantu abatsha abathathu abathatha isigqibo sokwenza injongo entsha kwaye bashiye ihlabathi lePaypal ngaphandle: uSteve Chen, uJawed Karim kunye noChad Hurley.
Lelinye lamaqonga athi, uGoogle, kwiminyaka kamva wagqiba ekubeni athenge kwaye atyale imali kuwo. Umbono wavela ngenjongo yokuyila isixhobo apho unokwabelana ngeevidiyo ngaphandle kokuba uzicinezele. Uninzi lwabaseki bayo baye basebenzela izixhobo ezifana ne-Facebook, kwaye ayilindelekanga kuba, ngokuhamba kwexesha, eli qonga le-audiovisual liye lakhula kwaye lithatha indawo engaphezulu yenethiwekhi yoluntu.
Okwangoku, bangaphezulu kwesigidi esinye abantu abasebenzisa iYouTube yonke imihla, ukongeza, isicelo ngokwaso siyilwe ngeelwimi ezahlukeneyo ezingama-1. inkcukacha efanelekileyo eyenza ibe sesona sicelo sisetyenziswa kakhulu kwihlabathi. Ikwayinjini yokukhangela yesibini kunye nendawo yesithathu etyelelwa kakhulu kwi-intanethi. Ukuza kuthi ga ngoku kukho iividiyo ezininzi eziqulethe inani elikhulu leembono, kodwa ingoma ye-Baby Shark Dance ithatha i-1 ephezulu, kunye ne-8,1 yezigidi zeembono.
NgeYouTube, awunakubhalisela kuphela amanye amajelo okanye abasebenzisi, kodwa ungenza eyakho, yenza ngokwezifiso kwaye ulayishe umxholo owufunayo. Ukuza kuthi ga ngoku, kukho iintlobo ezininzi zeetshaneli ezikhoyo: imidlalo yevidiyo, isondlo kunye nokutya, ezemidlalo, iindaba, umdlalo ohlekisayo, njl. Kufuneka nje usebenzise iakhawunti yakho kaGoogle kwaye uqale i-adventure njenge-YouTuber.
Ukuba uyalithanda ilizwe likaYouTube kwaye uthathe isigqibo sokusebenzisa iividiyo ezinde, unokwenza imali ngazo okanye ubandakanye intengiso kuzo. Ngale nto uya kufumana iividiyo zakho ukuba zibe negalelo ngenyanga nangonyaka ipesenti yemali kwaye ikwenze ube yintsholongwane ngakumbi nangakumbi. Okwangoku baninzi abasebenzisi be-Youtuber abathatha isigqibo sokwenza imali kwaye yonke imihla kukho amajelo amaninzi avulelwe uluntu.
Kuyenzeka ukukhuphela iividiyo ngokusebenzisa abaguquli abafumaneka kwi-intanethi. Abaguquli bakunceda ukuba ukhuphele ividiyo oyikhethileyo kwifomethi yeMP4. Khuphela nje i-URL yevidiyo kwaye uyincamathisele kwi-injini yokukhangela yesiguquli sakho, emva koko ukhuphelo lufikelelwe kwaye ukhuphelo luya kwenziwa ngokuzenzekelayo.
Umthombo: I-Europa Press
Isidlo esaqala uYouTube
I-2005 yayilixesha apho uqhagamshelo lwe-intanethi lwalungekho. Kwakungekho zicelo okanye iinethiwekhi zentlalo zokwabelana ngemifanekiso okanye iividiyo ezenziweyo kwaye kwakukho i-imeyile kuphela njengendlela yodwa.
Kwathi ngobunye ubusuku, uChad Hurley othile, kunye nabanye abahlobo bakhe ababini, beza nombono wokuyila iqonga okanye isicelo esinokwabelana ngeevidiyo kungakhathaliseki ubunzima baso. Kwakwanele nje ukwenza ividiyo kwisidlo sakusihlwa kwaye ngokukhawuleza zonke iiglobhu zokukhanya zahamba ezintloko zabo. Yenze njalo iYouTube.
Ividiyo yokuqala yembali yayo
Ividiyo yokuqala kwimbali yaphawula ngaphambi nasemva ngaphandle kwamathandabuzo kumsebenzi wakhe. Ewe, akuzange kube nge-23 ka-Epreli 2005 xa uYouTube wavumela ukulayishwa kwezinto ezifana neevidiyo. Umxholo wokuqala wathabatha imizuzwana engama-20 kwaye uChad unokubonwa njengomfana otyelela i-zoo yaseCalifornia. Ukuba ubusazibuza ukuba yeyiphi ividiyo yokuqala, sikufunele yona.
Elinye inyathelo elisingise eluzukweni
Ngeli xesha, akukho mntu wayesazi ukuba esi sicelo siya kuba sintsholongwane ngakumbi nangakumbi ekuhambeni kwexesha, bengazi nabadali baso okanye bebezilungiselele into ezayo. Yiyo loo nto ngelo xesha, iYouTube yaboniswa ngojongano lwabucala ngakumbi apho unokuthumela iividiyo kubantu obaqhelileyo. Yintoni eyabangela ukuba isicelo sigcinwe siyimfihlo yaye sinotyelelo olumbalwa kakhulu ebudeni beenyanga neminyaka.
Akuzange kube kwiinyanga kamva, xa iqonga lalayisha iqweqwe labantu abancinci ababini bedanisa ingoma yeqela lomculo elidumileyo i-Backstreet Boys kwaye yahamba yintsholongwane. Impumelelo yevidiyo yayinjalo kangangokuba yafikelela kwi-6 yezigidi zeembono.
UYouTube uthathe elinye inyathelo eliya phambili kwimpumelelo xa inkampani eyaziwayo yagqiba ekubeni ipapashe kwaye ikhuthaze imveliso yabo kuYouTube. Yayingekho ngaphezulu okanye ngaphantsi kweNike. Olu hlobo lwalungowokuqala ukubheja kuYouTube kwaye luqale ukwenza imali ngeevidiyo. Ividiyo yokuqala eyapapashwa luphawu yayiyindawo yentengiso eyayinomdlali webhola ekhatywayo waseBrazil uRonaldinho.
Impumelelo kunye noGoogle
Ngokuhamba kwexesha, iYouTube iye yatyelelwa ngakumbi ngamawaka kunye namawaka abantu. Iqonga lifikelele kubasebenzisi abazizigidi ezili-19,6. Oku kwabangela ukuba i-Google ivume ukusayina isivumelwano kunye neqonga kwaye ngale ndlela, i-YouTube inokufikelela apho bangangena khona imali.
Ngokuhambela phambili kwetekhnoloji, iYouTube nayo yaziva inesidingo sokuzihlaziya. Kwaye kunye nayo, inike ukufikelela kwiividiyo zokubukela kwi-480p nakwi-720p. Le nkcukacha ivumele ukuphuculwa komgangatho weevidiyo.
Abona basebenzisi beYouTube babalaseleyo
Umthombo: Ukukhupha umsinga
UMrBeart ngumdlali we-youtuber waseMelika kwaye ngoku uthathwa njengoyena mntu uhlawulayo kakhulu ukwenza iividiyo kuYouTube. Ekwabizwa ngokuba nguJimmy Donaldson, Waqala umsebenzi wakhe njengo-YouTuber kwi-2012 kwaye ukususela ngoko iividiyo zakhe ziye zanda kakhulu. Iividiyo zakhe zinika umxholo ohlukeneyo kunye noyilo, umzekelo, ungomnye wabo kuphela okanye omnye wabambalwa owenza iividiyo ezinomsebenzi onzima okanye imiceli mngeni kwaye wenza iividiyo zokuqala zevlogging. Ngaphandle kwamathandabuzo, eyona vidiyo yakhe ibalaseleyo yenye apho aphinde wafumana umoya woludwe lweNetflix yoMdlalo weSquid.
I-JuegaGerman yi-YouTuber yaseChile, ithathwa njengeyona idumileyo kwaye ibalulekileyo eChile. Ukwabizwa ngokuba nguGermán Garmendia kwaye umxholo wakhe usekwe ekupapasheni iividiyo zokuhleka okanye ezihlekisayo. , iivlog ezahlukeneyo okanye imizobo emifutshane kwaye yenziwe kwiminyaka yakutshanje njengomdlali. Ngokungathandabuzekiyo ungomnye weyona youtubers ibalulekileyo nedumileyo yamazwe ngamazwe. Ikwanazo namajelo amabini ahlukeneyo, enye yeyobuqu kwaye izinikele kuburharha nakubomi bemihla ngemihla, kwaye enye ikwimidlalo yevidiyo. Omabini la majelo afumana isigidi seembono.
Ngokuqinisekileyo waziwa ngokuba ngumntwana weYouTube. Igama lakhe lokwenyani nguRubén Doblas Gundersen. Le Youtuber enobuzwe baseNorway kunye neSpanish, izinikele ekupapasheni iividiyo apho idlala imidlalo yevidiyo yamacandelo ahlukeneyo, isenzo, ukoyikeka, imfihlakalo, njl. Ukwanalo neevidiyo ezininzi zeevlogs apho ahamba amazwe okanye abalisa ubomi bakhe bemihla ngemihla. Yeyona inababhalisi abaninzi kulo lonke elaseSpain kwaye alithandabuzeki elokuba wonke umntu uyalazi igama layo. Ngokungathandabuzekiyo ungomnye weyona youtubers ibalaseleyo emhlabeni kwaye sele enamabhaso amaninzi.
ULuisito ngumdlali weYouTube waseMexico owaziwa ngokuba nguLuis Arturo Villas Sudek. Iividiyo zakhe zibonakala kakhulu kuba zisekwe kuhambo lwakhe kwihlabathi liphela apho afaka khona uburharha obutsala umdla woluntu. Kananjalo uhlala esenza okunye ukutya kunye neevidiyo zokuzonwabisa. ULuisito okwangoku uthathwa njengoyena ubalaseleyo kwihlabathi ngenxa yezimvo azifumana mihla le, ngenyanga nangonyaka. Ukongeza, iye yawongwa ngamabhaso amaninzi kwaye ayibonakalisa kakhulu.
Ukuba ujonge ukuchukumisa uburharha kunye ne-adventure, awunakuphoswa ngumjelo wakhe.
Imbali kaYouTube inike utshintsho olukhulu kuluntu lwethu nakwitekhnoloji. Kangangokuba ngamnye kuthi unalo olu setyenziso kwifowuni yethu ephathwayo. Ke ngoko, iye yaba sisixhobo esiluncedo, enkosi kwizifundo zayo, ngamanye amaxesha yasindisa ubomi bethu ngaxa lithile.
Kukho amajelo amaninzi akhoyo ngoku, ukongeza, iYouTube nayo ine-algorithm ebonisa iividiyo okanye umxholo ofana naloo nto uqhele ukuyibona ukuze ungaphoswa kwanto. Ngaphandle kwamathandabuzo sisicelo esigqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » ngubani owadala i-youtube